7 Waxyaabood oo laga bartay kulankii galabta dhexmaray kooxaha Banaadir Sports Club iyo Elman – Gool FM
Haaruun November 25, 2016
(Muqdisho) 25 Nof 2016 – Kulan aad u xiiso badan ayaa galabta ka dhacay garoonka Banaadir Stadium Ex Koonis ee Dagmada C/Casiis, kaasoo dhexmaray kooxaha Banaadir Sports Club iyo Elman.
Ciyaartan ayaa ahayd midii Todobaad ee laga ciyaaro Horyaalka Dalkeenna Soomaaliya ee 2016/17, waxayna ciyaartan ku soo idlaatay 2-1 ay ku badisay kooxda Banadir Sports Club.
1- Banaadir Sports Club ayaa heshay rigooridii ama gool ku laadkii ugu horreyay tan iyo markii daaha laga rogay Horyaalka Soomaaliya ee xilli ciyaareedkan 2016-17.
2- Marcelo Samson oyugi ayaa ah xiddiga kaliya hal kulan ka dhaliya labo gool ma jiro illaa iyo hadda xiddig sidaas sameeyay xilli ciyaareedkan cusub.
3- Macallinka Kooxda Banadir Sports Club Mbalagu Hussein ayaa ah macallinka ajanabiga ah ee badiya labo kulan isku xigto tan iyo markii uu horyaalka furmay ma jiro macallin Ajanabi, sidaas sameyay macallinka kooxda Elman hal kulan oo kaliya ayuu badiyay, laakiin kulankii labaad waa laga badiyay.
4- Kooxda Banaadir ayaa wali waxaa ka maqan xiddigo muhiim u ah sida Gacal oo Turkiga ku maqan iyo Cabdulaahi Cabdi Xuseen (Moofow) oo dhaawac ugu maqan.
5- Elman ayaa heshay Fursadiihii ugu badnaa ciyaarta intii aay socotay, waxaana ay heshay 7 fursadood oo goolal loo filan karay.
6- Ciyaartan ayaa ahayd mid waali ah, marnaba kubadda dhulka ma aysan ku dhicin illaa muddo 30-daqiiqo ah, labada kooxood ayaana ciyaarayey kubbad joog sare ah.
7- Ciyaartan ayaa waxaa kasoo wada muuqday labo xiddig oo walaalo ah oo labada dhinac u kala dheelayey, waana Caadil Cali Nuur oo matalayay kooxda Banaadir Sports Club iyo walaalkiis Cabdullaahi Cali Nuur oo xirna fanaanadda kooxda Elman.
Kaararka digniinta ah oo ay qaateen kooxda Elman:-
Elman ayaa kaliya qaadatay labo jaale ama labo kaar oo kuwa digniinta ah, waxaana ka qaatay xiddigaha kala ah, Ssembatiya Godfry, Ssebuliba Cabdinuur.
Banaadir Sports Club jaallooyinka ay qaateen:-
Banaadir waxay qaadatay labo jaale ah, waxaana la kala siiyay ciyaaryahannada kala ah Kafunayo Imaam iyo Maxamed C/risaaq.
Bedelka Elman FC: Kooxda ayaa garoonka ka saartay xiddigaha kala ah, Cabdulaahi Cali Nuur (Agoogow), Cabdi qaadir Axmed Cumar (Afdheere) iyo Cabdulaahi Yuusuf Cusman (Xaajow), waxaana bedelo ku soo galay ciyaaryahannada kala ah, Cumar Muumin Daahir, Nayanzi Ronaldo Yasin iyo Cabdiqaadir C/raxmaan Maxamed, saddexdii bedel ee ciyaarta sidaas ayey ku isticmaashay kooxda Elman.
Bedelka kooxda Banadir SC: Banaadir waxa ay isticmaashay saddexdeeda bedel, waxana garoonka soo galisay xiddigaha kala ah, Maxamed C/risaaq, Axmed Maxamed Nuur, iyo Cabdifitaax Cali Geeli, waxaana bedello ku baxay laacibiinta kala ah, Caadil Nuur Cali, Hargaandi, Maxwell.
Garsoorayasha dhexdhexdinaya ciyaarta caasimadda: garoosoraha seeriga u ahayey waxa uu ahaa Xamse Xaaji Cabdi, calanwalaha koowaad, wuxuu ahaa Saleyman Sheekh Bashiir, Calanwalaha labaadna waxa uu ahaa Nuur Cabdi Maxamed, halka sarkaalka ciyaarta uu ahaa Aweys Cali Geele.
SAWIRRO XUL AH: Banaadir oo laga badin la'yahay 24 kullan oo xirriir ah
Jose Mourinho oo doonaya inuu bisha Janaayo u soo dhaqaaqo Willian